FBC - Addunyaa irratti du’a guddattoota irra qaqqabuuf sababni sadarkaa tokkoffaa qabatu balaa tiraafikaati jedhame
Addunyaa irratti du’a guddattoota irra qaqqabuuf sababni sadarkaa tokkoffaa qabatu balaa tiraafikaati jedhame
Finfinnee, Caamsaa 08, 2009 (FBC) Sababa du’aa guddattootaa keessaa balaan tiraafikaa daandii irraa sadarkaa tokkoffaa akka qabatu Dhaabbati Fayyaa Addunyaa beeksise.
A.L.A 2015tti guddattoonni miliyoona 1.2 lubbuunsaanii kan darbe yoo ta’u, isa keessaas du’a guddattoota 10 keessaa tokko balaa tiraafikaa daandiirratti qaqqabu waliin kan wal-qabte ta’uudha kan himame.
Balaawwan daandiirratti qaqqabaniif baay’inaan kan saaxilaman ammoo guddattoota dhiiraa waggaa 10 hanga 19 gidduu jiran ta’uu ibsameera.
Du’a guddattoota fi dargaggoota shamarran irratti qaqqabu ammoo dhibeen naannoo laphee fi of-miidhuun adda dureedha jedhamneera.
Sababaoota guddattoota waggaa 10 hanga 19 gidduu jiran du’aaf saaxilan 5 :
1ffaa. balaa daandiirraa
2ffaa. Rakkoo fayyaa qaama hafuura baafannaa waliin wal-qabtee mudatu
3ffaa. Of midhuu (ta’e jedhanii fi tasa of balleessuu)
4ffaa. Hoqqisiisaa fi garaa kaasaa
5ffaa. Bishaaniin liqinfamuu
Gabaasonni sadarkaa idil-addunyaatti ba’an akka eeranitti guyya guyyaan guddattoonni kuma 3 lubbuun isaanii nidarba.
Addunyaa irratti du’i guddattootaa bakka itti-mudatu keessaa harka sadii keessaa lama kan mudatu galii giddu-galeessaa kan qaban biyyoota Afriikaa fi Baha Eezhiyaattidha.
Du’a biyyoota kanneen keessatti mudatan baay’eesaa ittisuun kan danda’amu ta’uudha kan himame.
Balaa (tiraafikaa) daandiirraa
Addunyaarratti guddattoonnii fi dargaggoonni hedduun balaa tiraafikaa daandiirratti mudatuun lubbuusaanii kan dhaban yoo ta’u, kanneen keessaa lafoo kan deeman , fayyaadamtoonni saayikilii fi mootar saayikilii caalaa du’aaf saaxilamoodha jedhameera.
Guddattoonni waggaa 15 hanga 19 jiran balaa daandiirratti irra qaqqabeen balaawwan kuma 100 fi kuma 15 fi 302 keessaa gahee olaanaa akka qabatan himameera.
Qorattoonni Ingilizii akka ibsanitti daa’imman barnoota sadarkaa jalqabaa gara sadarkaa lammaaffatti ce’anii qofaasaanii gara mana barnootaa deemuu yeroon itti jalqaban baay’ee balaaf kan saaxilamedha.
Gabaasa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa kan barreessan Doktar Antoonii Kaasteeloo barnootni fi bulchiinsi nageenya tiraafikaa biyyoota tokko tokko keessaa konkolaachiftoonni saffisa isaanii akka hir’isan kan jajjabeessudha; kun ammoo balaa daandiirratti qaqqabu ni-hir’isa jedhu.
Ta’us biyyoonni hedduun gama kanaan baay’ee booddeetti hafaniiru; baay’ee hojjachuutu irraa eegama jechuun Doktar Koosteeloon nigorsu.
Waantota du’a guddattootaaf sababa ta’an kaan
Sadarkaa idil-addunyaatti du’i guddattootaa hir’ataa dhufuusaa gabaasonni ni-eeru.
Ta’us sababoonni du’aa tokko tokko baay’inaan wal-fakkaataa ta’aa dhufaniiru; isaan keessaas ofii of miidhuu (of ajjeesuun) tokko yoo ta’u, iddoo hedduutti baay’ataa dhufuusaa Doktar Kosteeloon himaniiru.
Keessumaa namoonni ofiisaanii balleessan baay’inni isaanii sadarkaa idil-addunyaatti baay’ee dabalaa dhufuusaa doktartichi ibsaniiru.
Kanaaf sababni mukuu cimaadha; guddattoonni ammoo eenyuun caalaa mukuuf saaxilamoo ta’uu waan danda’aniif kana hambisuuf deggarsi taasifamuufii qaba jedhu.
Oduuwwan Biroo « Miira badaa jireenya keessatti nu mudatu tooftaalee balleessuuf nu gargaaran	Timaatima nyaachuun kaansarii mar’ummaanii ittisa: qorannoo »